FASAM-BAHINY ANJANAHARY: Razana 78 nalevina eny an-toerana, 16 nymatin’ny Covid-19 – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:12
Accueil/Fanadihadiana Manokana/FASAM-BAHINY ANJANAHARY: Razana 78 nalevina eny an-toerana, 16 nymatin’ny Covid-19
Mbola malalaka ny toerana eny amin’ny Fasam-bahiny Anjanahary, fa tsy araky ny resaka aparitaky ny sasany. Razana 78 izao no nalevina teny nandritra ny fidiran’ny coronavirus teto Madagasikara, ka 16 no lavon’ny Covid amin’ireo. Miasa mafy ny mpiasa eny manoloana izany, ary novatsiana fitaovana ihany koa.
Yves Samoelijaona 20 août 2020
Ao anatin’izao « Hamehana ara-pahasalamana » izao, indrindra fepetra napetraky ny Fanjakana milaza fa tsy azo atao ny mitondra razana halevina raha ivelan’ny Faritra Analamanga, sy ireo lavon’ny Covid-19 ka tsy manana fasana andevenana ny fianakaviana, dia mahatratra 78 ny isan’ny razana nalevina eny amin’ny Fasam-bahiny Anjanahary, ary 16 ny matin’ny Coronavirus amin’ireo. Nisy roa koa anefa nalevina anaty fasam-pianakaviana eny an-toerana.
Noho ny fisian’ny fihibohana no antony nanokafana ny fasana teny an-toerana, rehefa nanome alalana ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Ny BMH no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fikarakarana ity fasam-bahiny ity. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny Sampana « promotion d’hygiène » eo anivon’ny BMH, ny dokotera Rasoanomenjanahary Anjarasoa, azo alain’ny fianakaviana ny razana rehefa afaka roa na telo taona eo. Mandoa hofam-pasana 60.000 Ar isan-taona kosa anefa, ny fianakavian’ny maty. Araka ny fanazavan’ny dokotera ihany, azo alevina any amin’ny fasan-drazany tsara ireo olona matin’ny Covid-19, fa misy ny fikarakarana manokana tsy maintsy arahina. Na izany aza, maromaro ihany ny fangatahana tonga eny anivon’ny BMH amin’ny fahazoan-dalana handevina eny an-toerana. Efa misy moa ny toerana natokana ho an’ny fandevenana olona matin’ny areti-mifindra, ary mbola malalaka eny an-toerana ka tsy misy ny olana.
Mahatratra 16 ny matin’ny Covid-19 milevina eny Anjanahary, hoy ny Dr Rasoanomenjanahary Anjarasoa
Fandevenana noho ny Covid-19 : Miezaka miaro tena, ary tsy mifampitakosina manaraka ny fepetra
Nilaza ny mpikarakara razana sy fandevenana eny an-toerana, anisan’izany Raharison Jean Noël fa matahotra ihany izy ireo manoloana ity fiparitahan’ny Covid-19 ity. « Tahotra misy foana, satria aretina no eo anoloana. Miezaka miaro tena, manaja ny lamina sy ny fepetra rehetra mifanaraka amin’izany. Rehefa tonga any an-tanàna, alana avokoa ny akanjo hatramin’ny kiraro, mandro aloha vao miditra ao an-trano », hoy ny fitantarany. Voalaza fa tsy mihoatra ny 10 ny isan’ny olona mandevina raha olona matin’ny Covid-19. «Misy aza olona enina na efatra ihany no manaraka ny razana mandeha mandevina. Alevina miaraka amin’ny vata », hoy ihany ny fitantarana. Rehefa ireo razana tsy mivoaka ny faritra kosa tsy mihoatra ny 50, araka ny efa fepetra napetraky ny Fanjakana.
Araka ny fizarana ihany, somary niova sy hentitra ny fepetra tamin’ity Coronavirus ity, satria efa nisy niasa hatramin’ny 14 taona teny amin’ny Fasam-bahiny Anjanahary ireo mpiasa, fa tamin’ity hafa mihitsy. « 14 taona niasa tety izahay. Efa niaina tamin’ny andron’ny pesta tamin’ny taona 2017 izahay. Be noho izany maty kokoa tamin’ireny. Amin’ny alina no alevina ny razana. Mandeha ny baiko hoe mandavaha, alefa anaty lavaka ny razana. Arahina miaramila izahay amin’izany. Tsy misy natahorana loatra tsy tahaka ny tamin’ity », hoy ny fitantaran’ny mpiasa.
Tsiahivina fa nanolotra kojakoja ho fiarovana amin’ny tsimokaretina Covid-19, ahitana arotava, “visière”, savony ary indrindra ny tambavy CVO ho an’ireo mpiandry, teny amin’ny Fasam-bahiny Anjanahary, ny mpanolotsaina avy amin’ny antoko Freedom, sady filohan’ny Vaomieran’ny sosialy, fidiovana, ary fahasalamana eo anivon’ny filan-kevitry ny tanànan’Antananarivo, Ramiandrisoa Hery August. Ireo mpiasa eny an-toerana ireo izay miatrika farany ireo mpiray tanindrazana lavon’ny Covid-19, milevina eny an-toerana. Araka ny fanazavana, efa nisy fotoana nanaovana fidinana ifotony teny amin’ny Fasam-bahiny Anjanahary. Fotoana izay nahatsapana fa tsy ampy fitaovana ireo mpiasa eny an-toerana, indrindra eo amin’ny lafiny fiarovan-tena, ka nahatonga izao hetsika izao. Nanamafy ny teo anivon’ny mpanolotsain’ny tanàna avy amin’ny antoko Freedom, fa na dia ilaina aza ny tsikera, tsara kokoa raha tonga dia fandraisana andraikitra mivantana toy izao no hatao, mba ho porofo mivaingana amin’ny fifanomezan-tanana.
VOINA NOHO NY COVID-19: Tsy marina ny filazana fa feno ny Fasan’Anjanahary
Andro maromaro lasa izay, niely ny vaovao fa feno ny Fasana eny Anjanahary, noho ny fisian’ny valanaretina coronavirus. Nambaran’ny mpiambina ny Fasam-bahiny eny Anjanahary, Randrianomenjanahary Daddys fa «manodidina ny 12 ha ny velaran-tany misy ity Fasam-bahiny ity, ary midadasika dia midadasika. Nanomboka nisian’ny valanaretina coronavirus no ho mankaty, izany hoe, ny tapaky ny volana marsa, dia 78 ireo nodimandry nalevina teny an-toerana, ka ny 16 amin’ireo no olona lavon’ny valanaretina covid-19». Midika izany, fa tsy marina ny filazana fa feno ny Fasam-bahiny ety Anjanahary. Taorian’ny fepetra noraisin’ny Fanjakana momba ny tsy fivoahan’ny razana milevina ivelan’Antananarivo, dia efa misy ny toerana natokana ho azy ireo ho an’izay mangataka eny amin’ny Fasam-bahiny Anjanahary. Misy sokajiny ny toerana natokana ho an’ireo olona nindaosin’ny fahatesana coronavirus sy ireo maty tokony halevina, saingy tsy afa-nivoaka ny renivohitra, raha ny fanampim-panazavana. Ny fomba fiasan’ireo mpiambina ny Fasam-bahiny eny Anjanahary dia misy ny tomponandraikitra mandray an-tanana ny fianakavian’ireo mana-manjo, manamarina ny antontan-taratasin’izy ireo ahafaha-manatanteraka ny fandevenana. Samy tafiditra ao anatin’io avokoa, na ireo olona maty tokony halevina ivelan’ny faritra na ireo olona nindaosin’ny fahafatesana noho ny covid-19. Mizara famantatra roa indray ireo taratasin’ilay olona dia ny “code A” sy ny “code B”. Ho an’ny code A, ireo razana tsy mivoaka ny Faritra, fa ny “code B” kosa indray, ireo razana voan’ny coronavirus. Efa misy faritra natokana ho azy ireo tsirairay avy, izay mifanila toerana, hoy hatrany i Daddys mpiambina eny amin’ny Fasam-bahiny Anjanahary.
Ny Fasam-bahiny Anjanahary
Misy ny dingana arahina…
Nambaran’ny Dr Rasoanomenjanahary Anjarasoa Maharavo tomponandraikitra eo anivon’ny Sampandraharaha misahana ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, tetsy amin’ny BMH Isotry omaly, fa “raha misy olona nodimandry ka tsy manana havana eny amin’ny Hopitaly, dia misy ny fampilazana avy eny amin’ny Hopitaly tonga aty aminay ary ry zareo ihany no maka fahazoan-dalana mandevina any amin’ny Firaisana. Anjaran’ny BMH kosa, ny manatontosa ny fandevenana any amin’ny Fasam-bahiny Anjanahary.
Ho an’ireo olona matin’ny valanaretina na tsimokaretina indray, misy ny fomba fitantanana manokana. Ny olona matin’ny tsimokaretina na valanaretina, fito taona aorian’izay, vao azo ahetsika ny razana. Tafiditra ao anatin’izany, ohatra, ireo olona matin’ny pesta. Aorian’io fe-potoana io, vao azo afindra ny razana. Izany hoe, alevina eny amin’ny Fasam-bahiny na atao anirotra, ary afaka fito taona vao azo ampidirina am-pasan-drazana. Ho an’ireo olona matin’ny coronavirus, afaka roa na telo taona vao azo ahetsika na alain’ny fianakaviana. Lamina manokana avy any amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana no anton’izay fanetsehana ny razana izay, ary misy fikarakarana manokana, vao azo am-pidirina am-pasan-drazana. Noho izany, tsy maintsy hajaina avokoa ny fepetra rehetra, toy ny fametrahana fa amin’ny maintany ihany no afa-manetsika ny razana.
“Misy ny toerana natokana ho an’ireo matin’ny valanaretina”, hoy i Daddys.